The Bible: Nnwom 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 NA-TWI
Nkonimdi mpaebɔ1Awurade ntie wo wɔ wo haw mu! Yakob Nyankopɔn mmɔ wo ho ban! 2 Ɔmma wo ne mmoa mfi n’asɔrefi ne Sion Bepɔw so. 3 Onnye w’afɔrebɔde nyinaa na ne nyinaa nsɔ n’ani. 4 Ɔmma wo nea ehia wo, na wo nhyehyɛe nyinaa nyɛ ye. 5 Na yɛateɛm adi ahurusi wɔ wo nkonimdi no ho na yɛakamfo Onyankopɔn wɔ nea wayɛ ama wo no ho. Awurade nyɛ w’abisade nyinaa mma wo. 6 Afei minim sɛ Awurade ma ne hene a wayi no no di nkonim. Otie no wɔ ne soro kronkron na ɔnam ne tumi so ama wadi nkonim akɛse. 7 Ebinom de wɔn ho to wɔn nteaseɛnam a wɔde kɔ ɔko so, na afoforo nso de wɔn ho to wɔn apɔnkɔ so, nanso yɛn de, yɛde yɛn ho to yɛn Awurade Nyankopɔn tumi so. 8 Saa nnipa no hintiw, hwe ase, na yɛn de, yɛbɛsɔre agyina pintinn. 9 Ma ɔhene nni nkonim, O Awurade; na sɛ yɛfrɛ nso a, gye yɛn so. NA-TWI : Nnwom 20